Holokost - Wikipedia
Maalinta Xusuusta Holocaust ee Caalamiga ah 2022
Holokost waa Xasuuq loo geestay Yahuuda dagaaladii aduunka kii labaad ww2, waxoo ka dhacay Yurub. Xasuuqaan waxaa lagu gooracay dad gaaraayo ilaa 10 miliyan oo yahuud ah.waxa lagau laayay dadka ugu badan wadamada jarmalka iyo ustaeiya
Waxay Yuhuuddu ku beegsadeen in la dilo iyada oo qayb ka ah dhacdooyin ballaaran oo ku lug leh cadaadis iyo dilal kooxo kale ah oo ay ku kaceen xukunka, oo ay ka mid yihiin Roma, iyo "si xun u xanuunsan", iyo sidoo kale khaniisiinta , kuwa ka soo horjeeda siyaasadda, Markhaatiyaasha Yehowah, kuwa maxaabiista ah ee Soofiyeeti, iyo Slavs Jarmalku wuxuu dhaqan geliyey cadaadiska marxaladaha.
Qaramada Midoobay (QM) ayaa ku boorisay dalalka xubnaha ka ah inay ixtiraamaan lix milyan oo Yuhuud ah, Markhaatiyaasha Yehowah iyo kooxaha kale ee dhibanayaasha ah, kuwaas oo ay si nidaamsan oo naxariis darro ah u dileen Naasiyiintu iyadoo dunidu ay xuseyso Maalinta Xusuusta Holocaust ee Caalamiga ah (IHRD).
Maalinta, oo ku beegan Janaayo 27, waa taariikh astaan ​​ah oo lagu xusayo dhibanayaashii Naziism-ka. Argagaxisada Nazi ayaa malaayiin bartilmaameedsatay sababo bayooloji, dhalasho, ama fikrad siyaasadeed. Kumanaan Markhaatiyaal Yehowah ah -Masiixiyiin - ayaa lagu dilay ama lagu damiyay xeryaha Naasiyaadka diintooda Masiixiga aawadood oo ay weheliyaan malaayiin Yuhuud ah iyo kooxaha kale ee dhibanayaasha ah.
Iyadoo la raacayo mawduuca sanadkan ee hagaya IHRD "Xusuusta, Sharafta iyo Cadaalada" QM waxay qaadatay fursada si ay ugu dhiirigeliso aduunka in la keeno wacyiga iyo ka hortagga xasuuqa mustaqbalka. "Qoritaanka taariikhda iyo ficilka xusuusta waxay u keenaysaa sharaf iyo cadaalad kuwa ay damceen in ay xasuuqaan Holocaust," Qaramada Midoobay ayaa ku tiri hadal ay soo saartay.
Matxafyada Holocaust iyo xusuusta adduunka oo dhan waxay soo bandhigaan farshaxanno iyo tabeelooyin lagu xusayo cadaadiskii Markhaatiyaasha Yehowah.
Matxafka Gobolka Auschwitz-Birkenau wuxuu ku nuuxnuuxsaday dareenka Qaramada Midoobay isagoo sharfay Markhaatiyaasha ku adkaystay mabaadi'dooda akhlaaqda.
"Marka laga reebo sheegis kooban, suugaanta taariikhda Auschwitz Concentration Camp kama xisaabtanto Markhaatiyaasha Yehowah (oo lagu tilmaamo diiwaanka xerada sida Kitaabka [Ardayda]) kuwaas oo loo xiray xukunkooda diimeed. Maxaabiistani waxay mudan yihiin in fiiro gaar ah loo yeesho sababta oo ah sida ay ugu suurtagashay in ay xajiyaan mabaadi'dooda akhlaaqeed marka loo eego xaaladaha kaamka," Matxafka Gobolka Auschwitz-Birkenau ayaa sidaas yidhi.
Markhaatiyaasha Yehowah, oo waagaas loo yaqaanay Ardayda Baybalka, waxay ahaayeen "kooxda kaliya ee Reich Saddexaad ee lagu silciyo iyadoo lagu salaynayo diintooda oo keliya," Professor Robert Gerwarth ayaa yidhi.
Nidaamkii Naasigu wuxuu Markhaatiyaasha ku calaamadiyay “cadowga Dawladda,” sida uu qabo taariikhyahan Christine King, sababtoo ah “Diididdooda dadweynaha ee ah inay aqbalaan xitaa waxyaabaha ugu yar ee [Naasinimada], oo aan ku habboonayn caqiidadooda iyo waxay aaminsan yihiin.”
Sababo diimeed, Markhaatiyaasha dhexdhexaadka ah ee siyaasadeed waxay diideen inay bixiyaan salaanta "Heil Hitler", ka qayb qaataan falalka cunsuriyadda iyo rabshadaha, ama ku biiraan ciidanka Jarmalka.
Waxaa intaa dheer, "suugaantooda waxay si fagaare ah u caddeeyeen xumaanta nidaamka, oo ay ku jiraan waxa Yuhuudda ku dhacaya," ayuu yidhi King.
Markhaatiyaasha ayaa ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee loo diray xerooyinka fiirsashada, halkaas oo ay siteen calaamad u gaar ah—saddex xagal guduudan.
Cilmi-baaraha sare ee Detlef Garbe ayaa qoray: "Ujeeddada la shaaciyay ee taliyayaashii NS [Naasiyada] waxay ahayd in gebi ahaanba ardayda Kitaabka Quduuska ah laga saaro taariikhda Jarmalka."
Naasiyiintu waxay damceen inay jebiyaan xukunnada diimeed ee Markhaatiyaasha iyagoo siinaya xorriyad ay ku beddelaan ballan addeecid. Halbeegga Erklärung (oo la soo saaray 1938) wuxuu u baahday saxiixaha inuu ka tanaasulo caqiidadiisa ama keeda, uu dhaleeceeyo Markhaatiyaasha kale ee booliiska, si buuxda ugu dhiibo dawladda Nazi-ga, oo uu ku difaaco "Aabbaha" isagoo hub haysta.
Saraakiisha xabsiga iyo kaamamka ayaa inta badan adeegsada jirdil iyo waxyeelid si ay Markhaatiyaasha ugu qanciyaan inay saxiixaan.
Sida laga soo xigtay Garbe, "tiro aad u yar" oo Markhaati ah ayaa ka noqday rumaysadkoodii.
Geneviève de Gaulle, oo ah ina abti u ah Jeneraalka Faransiiska Charles de Gaulle, xubinna ka ah iska caabinta Faransiiska, ayaa ka sheegtay maxaabiista Markhaati ee dumarka ah ee ku jira xerada fiirsashada ee Ravensbrück:
“Waxa aan aad ula dhacay iyaga ayaa ah in ay ka bixi karaan wakhti kasta iyaga oo saxeexaya ka tanaasulida iimaankooda. . . . Ugu dambayntii, dumarkan oo aad mooddo inay aad u tabar daran yihiin oo daalan, waxay ka xoog badnaayeen SS-ta oo awood iyo wax kasta oo ay awood u leeyihiin. Waxay lahaayeen xooggooda, waxayna ahayd awooddooda oo aan cidina garaacin.”
Af hayeenka Markhaatiyaasha Yehowah waxa uu sheegay muhiimada ay leedahay in la xasuusto Markhaatiyaasha Yehowah ee lagu hayay cadaadis xoog leh oo ku hoos jiray taliskii Nazi-ga iyo kuwa wali lagu hayo, xabsiyada iyo jirdilka waddamo kale maanta iimaankooda darteed.
Ku dhawaad ​​35 000 oo Markhaati ah oo ku sugnaa Yurubta Nazi-gu qabsaday, in ka badan saddex-meelood meel ayaa la kulmay cadaadis toos ah. Inta badan waa la xiray oo waa la xiray. Boqolaal carruurtooda ah ayaa loo kaxaystay guryihii Nazi-ga ama dib-u-qaabaynta. Ilaa 4 200 oo Markhaati ah ayaa aaday xeryihii Nazi-ga. Dad lagu qiyaasay 1 600 oo Markhaati ah ayaa dhintay, 370 qof ayaa la dilay.
Xusuusashada waayo-aragnimada Markhaatiyadu waa muhiim sababtoo ah weli si nidaamsan ayaa loo weeraray - xabsiga, la garaacay, iyo jirdilka - sababtoo ah si nabad ah iimaankooda ugu dhaqmeen dalalka qaarkood, Ruushka ayaa ah cadaadiskii ugu horreeyay.
Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, guul-darradii ku timid qasabka Nazi ee kiiska Markhaatiyada waxay ka duwan tahay u hoggaansanaanta bulshada baahsan ee ujeeddooyinka Nazi ka hor iyo inta lagu jiro Holocaust.
Iska caabbinta aan rabshad lahayn ee dadka caadiga ah ee cunsuriyadda, qarannimada xad dhaafka ah, iyo rabshadaha waxay u qalantaa ka fiirsi fikir leh Maalinta Xusuusta Holocaust ee Caalamiga ah ee sanadkan.
Sidee bay u dhinteen?
Xukunno dil ah: Ku dhawaad ​​400 oo Markhaati ah ayaa lagu dilay Jarmalka iyo dalalkii Naasigu gumaysan jiray. Inta badan dhibanayaasha waxaa la soo taagay maxkamad, waxaana lagu xukumay dil, iyo qoorta laga gooyay. Kuwo kale waa la toogtay ama la daldalay iyada oo aan la helin dhegaysi maxkamadeed oo rasmi ah.
Xaalado xabsi oo aad u daran: In ka badan 1,000 Markhaati ayaa ku dhintay xeryaha iyo xabsiyada Nazi-ga. Waxaa la shaqeeyay ilaa dhimasho ama waxay u dhinteen jirdil, gaajo, hargab, jirro, ama daryeel caafimaad xumo. Natiijadii loola dhaqmay si naxariis darro ah, qaar kale waxay dhinteen wax yar ka dib markii ay xoroobeen dhamaadkii dagaalkii labaad ee aduunka.
Sababaha kale: Markhaatiyaasha qaar ayaa lagu dilay qolalka gaaska, waxaa lagu sameeyay tijaabooyin caafimaad oo dilaa ah, ama waxaa lagu duro irbado wax dilaya.
Maxaa loo silciyey? Markhaatiyaasha Yehowah waa la silciyey sababtoo ah waxay u hoggaansameen waxbaridda Kitaabka Quduuska ah. Markii dawladdii Naasigu ka dalbatay Markhaatiyaasha inay sameeyaan waxa Kitaabka Quduuska ah diidayo, Markhaatiyadu way diideen inay adeecaan. Waxay doorteen inay “Ilaah addeecaan sidii taliye ahaan dadka.” Ka fiirso laba meelood oo ay doorteen.
Dhex dhexaadnimo siyaasadeed. Sida Markhaatiyaasha jooga dhammaan dalalka maanta, Markhaatiyaasha Yehowah ee ku hoos noolaa xukunkii Nazi waxay dhexdhexaad ka ahaayeen arrimaha siyaasadda. Sidaa darteed, way diideen
Ka mid noqo ciidamada ama taageer dadaallada dagaalka
Ka codee doorashooyinka ama ku biir ururada Nazi
Salaan swastika ama dheh "Heil Hitler!"
Ku dhaqanka caqiidadooda. In kasta oo laga mamnuucay inay rumaysadkooda ku dhaqmaan, Markhaatiyaasha Yehowah way sii wadeen
Ku Kulmo Ducada iyo Cibaadada.
Ku wacdi fariinta Kitaabka Qudduuska ah oo qaybi suugaanta Baybalka ku salaysan
U roonow deriskooda, oo ay ku jiraan Yuhuuda.
Xaji caqiidadooda, iyagoo diidaya inay saxeexaan dukumeenti diidaya waxay aaminsan yihiin
Professor Robert Gerwarth wuxuu soo gabagabeeyey in Markhaatiyaasha Yehowah ay ahaayeen "kooxda kaliya ee Reich Saddexaad ee lagu silciyo iyadoo lagu salaynayo caqiidadooda diineed oo keliya." Maxaabiistii xerada-xidhista ee saaxiibbadiis ah ayaa u yimid inay Markhaatiyaasha Yehowah ku bogaadiyaan mowqifkooda adag. Mid ka mid ah maxbuus Australiyaanka ah ayaa arkay: “Ma galaan dagaal. Waxay ka door bidayaan in la dilo intii qof kale la dili lahaa.”
Halkee ku dhinteen? Kaamamka Xoogsiinta: Inta badan Markhaatiyaasha Yehowah waxay ku dhinteen xeryaha-fiirsashada. Waxa lagu xidhay xeryo ay ka mid yihiin Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen, Neuengamme, Niederhagen, Ravensbrück, iyo Sachsenhausen. Sachsenhausen oo keliya, ilaa 200 oo Markhaatiyaasha Yehowah ayaa la xaqiijiyay.
Xabsiyada: Qaar ka mid ah Markhaatiyaasha ayaa jirdil loogu geystay xabsiyada. Qaar kale ayaa u dhintay dhaawacyadii ka soo gaaray su'aalaha.
Meelaha dilka lagu fuliyay: Markhaatiyaasha Yehowah waxaa lagu fuliyay inta badan xabsiyada Berlin-Plötsensee, Brandenburg, iyo Halle/Saale. Intaa waxaa dheer, ilaa 70 goobood oo kale oo Markhaatiyaal lagu toogtay ayaa la diiwaangeliyay.
sidi kale fiiri[wax ka badal | wax ka badal xogta]
↑ Maxaa Laydiin Yiraahdaa Markhaatiyaasha Yehowah?
↑ What Happened to Jehovah’s Witnesses During the Time of the Holocaust? (en)
↑ Sidee Baad u Garan Kartaa Waddada Runta ah oo Ilaah Inoo Geesa?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Holokost&oldid=230043"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Febraayo 2022, marka ee eheed 13:18.